Wonke umuntu uyazi ukuthi akukho ezemidlalo kunzima kakhulu ukunciphisa umzimba. Ikakhulukazi kulabo abanenkinga umzimba kahle. Akubona bonke nethuba bahlanganyele njalo ukuqina, ukubhukuda, ukugijima kanye nezinye izinhlobo umzimba, kusiza ukunciphisa umzimba. Kulokhu, iza ukusiza intambo ezimnandi zakudala. Phela, le nto elula, okungaba ziseduze njalo, uyakwazi kakhulu. Ezweni ezemidlalo, ukweqa intambo abizwa ngokuthi "ukweqa sina." Kulesi sihloko, sizobe sesibheka ukuthi intambo gxuma elisetshenziselwa ukunciphisa umzimba, indlela gxuma kule apharathasi, yena muhle.
A nomthelela omuhle komzimba entanjeni kungaba okuningi ukukhuluma. Siphinde cabanga umbuzo ngokulandela kwesisindo. Bangaki amakhilogremu kungenziwa kabusha ngokwenza ukweqa intambo?
It is wafakazela ukuthi kusukela iphuzu Ngenxa ukusetshenziswa kilojoule ukuzivocavoca nale igobolondo elula akuzona eliphansi kuya ukugijima okukhulu noma ukubhukuda the ukukhasa. A ngomzuzu-15 umsebenzi ophansi khudlwana entambeni evumela ukuba usebenzise ama-kilojoule angaphezu kwangu-30 ngaphandle yoga class efanayo, Ukuvivinya umzimba ngendlela, ukudansa, nezinye izinhlobo ezifanayo umsebenzi. Ngakho-ke, labo abafuna ngokushesha futhi kalula ulahlekelwe isisindo, khetha ukweqa intambo. Amakholori ashisiwe ngale ndlela asikho sibi kakhulu kunalokho okuboniswa ejimini lapho imithwalo amandla. Ihora ukuqeqeshwa ungachitha okunama-kilojoule angu-600.
Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe intambo wukuthi amakilasi angadingi isikhathi esiningi futhi isikhala. Igobolondo kakhulu efanayo esifanelana ephaketheni lakho kalula. Kungathatha eholidini sesondlo nsuku yefomu, ngisho emsebenzini, ukuze ube nesibindi umzimba ngemva imisebenzi sedentary eside.
Ngeshwa, kukhona ezinye Izimo skinning. Akukhona ofanele kubantu abaphethwe ubuhlungu bamalunga, ukukhetha kanye labo Ngahlinzwa ku kneecaps noma uqwanga. Abantu abanjalo kufanele ukhethe bhukuda.
Olukhulu ukweqa intambo futhi contraindicated kulezo owaziyo ukuthi babhekene nezinkinga migraine futhi yisimiso senhliziyo nemithambo yegazi, kanye ingcindezi intracranial.
Futhi labo abanhliziyo isisindo idlula 100 kg, kutuswa lokuqala ukunciphisa umzimba ngamanye izindlela (okungenani 10 kg), bese uqhubekela phambili skinning. Into wukuthi ngenxa isisindo okweqile umzimba uthola umthwalo ngokweqile.
Lolu hlobo umzimba, kanye ukugijima, akuvunyelwe nakancane uma amahora esingaphansi kwezinsuku ezimbili emva kokudla.
Noma yimuphi enhle intambo i Amazing ngempumelelo, bekuyoba ufisa. Kodwa kungcono uma uzohlangabezana nezidingo ezilandelayo:
Ubude. It kuncike okumilé msubathi. Mhlawumbe wonke umuntu azi ukuthi angakwenza kanjani ukhetha le ndlela, kodwa thina Ngisakhumbula. Rope eligoqiwe uhhafu bese ngihlaliswa ukuze uthinta phansi, udinga ukubheka lokho ezingeni uyozisingatha. Bafanele mayelana esifubeni ezingeni.
I ububanzi nesisindo. Rope bungabi ubukhulu ezahlukene, okuyinto incike ukuguqulwa kanye impahla okuyindawo senziwa. Kuyinto enhle 7-10 mm projectile. Kubalulekile ukuthi wayengeyona esindayo kakhulu (i-ukuxegiselwa indophi, ukuqeqeshwa nzima futhi ziphumelela kangcono kuyoba).
izibambo kokunethezeka. Lolu khetho akulona kubaluleke njengokugwema ubude, kodwa kulabo uhlela ukuthatha isikhathi eside, kufanele-ke ngaphandle uma sekuhlungwa. Izibambo kufanele kube ukhululekile ukuba aqambe amanga ezandleni zakhe futhi azisheleli lapho vspoteyut.
Phela, gxuma yabasubathi intambo, okuyinto esetshenziswa ejimini, ayinakho izibambo. Kunalokho, wathungela ifindo noma wenze izandiso encane.
Yilokho, manje uyazi ukuthi izidingo kumele bahlangabezane intambo gxuma isisindo ukulahleka.
Indlela gxuma: ukuqeqeshwa
Ngokuvamile sonke sibhekana lolu daba esikoleni, uma udinga ukuthatha sebhithi ezifanele. Kulabo ayikwazanga zifunda esikoleni noma nje ukhohlwe indlela yokukwenza, sikhumbula. Ukuqeqeshwa ukuba lula futhi fast, ulwahlukanise zibe izigaba ezintathu:
Into yokuqala okudingeka ukuba ufunde indlela gxuma intambo ngaphandle. Kubalulekile ukuthuthukisa amakhono agqashule ku tiptoes phansi ngoba ambalwa ngamasentimitha. Ngakho kubalulekile ukuba athobele omatasatasa - mayelana 100 kuzuba ngomzuzu.
Eyesibili esiteji - isidingo sokufunda ukujikisa synchronously nge emiphemeni ukweqa. Okokuqala Prakthiza lokhu elula isandla ukunyakaza. Ukuze wenze lokhu ngesandla esisodwa sithathwe kokubili izibambo. isidingo Phenduka ukuze intambo writhing kancane kakhulu phansi. Manje ungakwazi ukuhlanganisa lokhu nge ukweqa, kodwa ukuthatha igobolondo ngezandla zombili kuze kubalulekile. Funda hit intambo phansi ngesikhathi ngesikathi izinyawo zakhe eyanyatheliswa ngalo kuwo.
It kuphela uhlala ukuhlanganisa zonke amakhono wazama futhi ihlolwe futhi uthole gxuma egcwele. Manje yakho ithuluzi esisemqoka nsuku zonke ekulweni isisindo okweqile kungaba intambo gxuma isisindo ukulahleka.
Indlela gxuma: ezicashile
Isihluthulelo sempumelelo ku skinning - inqubo efanele. Noma ubani ongakhothami engazange iphendulele wakhe ekuqaleni, ngenxa yalokho ngeke bakwazi ugxume eside sifinyelele elamukelekile.
Ngakho, uthatha intambo ngoba isibambo, udinga bend izindololwane zakho, okuyinto kuthiwa sicindezelwe emzimbeni. Nale isikhundla eziyisisekelo kufanele uqale yimuphi umsebenzi projectile. Movement kufanele nokuqalisa ngokushintshanisa emabhulashini esikhundleni izandla. Izingalo emahlombe kufanele nquma ngalesosikhathi ngeke usukhathele, futhi ungazuza ijubane ezinhle.
Landing ngemva gxuma kuyadingeka ukuze ayeke pads, kunokuba wonke endaweni yabo. Ngakho, kulo lonke iqoqo uthinte umhlaba kuphela amasokisi. Kubalulekile ukuthi ngemuva uhlala iqonde ngenkathi uziphonsa emanzini.
Ekuqaleni, asikho isidingo ukusheshe ukufinyelela Tempo okusezingeni eliphezulu. Ngezinye hambisa kuqala isigqi esenza ukuba angamlandeli. Ukuqalisa asetshenziselwa projectile, ngeke ubone ukuthi kancane kancane ucosha ijubane futhi maduze nje izobonwa jumping like okhokhelwayo.
Indlela ukunciphisa umzimba ngosizo intambo? Isethi umzimba
Qala jumping neminye imi imithwalo amancane. I zokuqala ezingu - izifundo ezimbili ngosuku imizuzu emihlanu. Izinsuku ezilandelayo - amakilasi amabili kumaminithi eziyisikhombisa, njalo njalo. Ngemva kwamasonto ambalwa uzokwazi ukufinyelela angu-15 izindlela, bese akazange ukwandisa isikhathi of the Amazing amaminithi angu-30.
Kulabo abafuna ukuba ulahlekelwe isisindo ukuqeqeshwa intambo okusheshayo kufanele kube usubuzwa nakakhulu. Kudingeka ukuthi uqale nge izindlela yemizuzu engu-15 futhi ngesonto ukwandisa isikhathi sabo imizuzu 40. Kodwa kulokhu kufanele ulalele umzimba wakho, ngakho-ke akuveli ekhathele. Ungakhohlwa ukuthi impilo uphezu kwakho konke! Phakathi indlela yokuqala angakwazi futhi kufanele bathathe ikhefu for 30-60 imizuzwana.
Ukuze ulahlekelwe ngempumelelo isisindo bese uvula ukweqa okuyisidina kakhudlwana nakho okuthakazelisayo, ungakwazi ziyahlukahluka kubo. Ithebula elingezansi ihlanganiswe ukuqeqeshwa inketho Isibonelo yemizuzu engu-30 indlela. Uma wenza imizuzu engu-15, mane nje ukusika esigabeni ngasinye kabili, uma 10 - ezintathu izikhathi, nokunye.
isikhathi Lead, imizuzu inketho kuzuba
3 Alternately ngakwesokunxele kanye nesokudla
4 Nge mbumbulu izinhlanga
3 Emuva naphambili, esinxeleni nakwesokudla ngezinyawo ezimbili
2 Nge ukunyakaza reverse intambo
1 nge sawela
5 Inguquko ukuze ngonyawo lonwabu
Uma ungakwazi ukwenza kuzuba ne ukugijima eyenziwe ngenxa yokuntuleka isikhala, ungakwazi ukushintsha kubo nomunye ushintsho izinyawo. Futhi esikhundleni bagxume besuka nangapha ongenza ukunyakaza kuphela phambili futhi emuva.
Zokugcina ezingu-5 amaminithi kudingeka ukuze kuncishiswe ukushuba umthwalo wenze nse ngokuzumayo. Ngemva kokwenza izidingo eziyinkimbinkimbi ukuze baphumule imizuzu okungenani 5.
Ungagijimeli anqobe lolu hlelo, ngoba kubenzima futhi kudinga okuhlangenwe nakho abanye. Kodwa uma ugcina amakhono akho, wena nakanjani ngeke ulithumele.
Uma uphatha ukunciphisa umzimba ngosizo intambo, kungenzeka ukunciphisa isikhathi ukuqeqeshwa imizuzu 10-15 of. Le mali uyohlale izinzwane yethu kanye nemizwelo onamileyo. ewusizo Ikakhulukazi ukuba aphishekele intambo kulabo yokuphila ogxile sedentary.
Rope nge counter
Abadali izindophi lokuqala Uzomangala kakhulu ukube bebazi ukuthi amagobolondo yesimanje bangathembela kilojoule amagremu fat ashisiwe ngesikhathi Amazing futhi, kanye isikhathi indlela, futhi inani Uhobhane. Umbuzo naphutha lezi amamitha uvuliwe, Nokho, kuthiwa ukubuyekezwa, ukufundwa yabo abasondelene ngokoqobo, ikakhulukazi uma igobolondo senziwa ephephile ngumkhiqizi. Yeqa intambo nge counter kufanelekile labo banesithukuthezi nje ngena futhi bafuna zibukeke ukuqapha izimpumelelo zabo.
Ngakho, uzoba sathola ukuthi intambo gxuma elisetshenziselwa ukunciphisa umzimba, indlela gxuma ke, indlela ukukhetha futhi yini enye kufanele sinake.
Lolu hlobo imfundo ngokomzimba kuyinto cardio kakhulu, eba imilenze, kusiza ashise amanoni ngokushesha. Yingakho kuthandwa kakhulu phakathi abadlali professional, kuhlanganise okwakwenza abashayi-sibhakela. lover Omkhulu futhi umgqugquzeli intambo kwaba Muhammad Ali. On imiboniso kwakhe ezitshakadule Mashi ngomzuzu-15 okufundwa phakathi okuyinto waphumula nje umzuzu. Ngesikhathi boxer efanayo yazenzela izinga eliphezulu kakhulu - 220 kuzuba ngomzuzu. Intambo yokweqa, mncane akuyena umuntu owaziwa, futhi ungakwazi kalula ukwenza okufanayo.
Iphuzu elibalulekile kukho ukuqaliswa kwanoma yikuphi ukuqeqeshwa - ukulawula isimo sabo, futhi kulesi simo kubalulekile ikakhulukazi, njengoba ukweqa ngezintambo umthwalo ezinkulu emzimbeni. Batinikela Shake wonke umzimba futhi kumenze opredelnie Stresa. Ngakho-ke, ukubhekana nazo kufanele ngokukhalipha ngokucophelela.
Tabata: ukubuyekezwa kanye Imiphumela
Ezibiyele Ukudla: imenyu ngesonto
Umlando Carnival eRussia
Imininingwane yokuthi ungashintsha kanjani i-apple id yephasiwedi
Mangosteen - izithelo akunika impilo nokuphila kade
Isikimu wokudonsa ku bar ilula futhi ngempumelelo